Chipolo One Spot, enye indlela ebalaseleyo kwii-AirTags | IPhone iindaba
Chipolo One Spot, enye indlela ebalaseleyo kwii-AirTags
ULuis Padilla | 10/06/2021 19:20 | Izixhobo ze-IP, Ezahlukeneyo
I-Chipolo isinika eyona ndlela iyinyani yokuqala kwi-Apple AirTags ngemveliso, Ngexabiso elisezantsi, usinika konke ukulunga koPhando lwenethiwekhi kwaye yongeza amanye amanqaku endaweni yayo eyenza ukuba ithengwe ngokufanelekileyo.
Xa u-Apple wabhengeza iindaba zenethiwekhi yeBusca, uChipolo wayengomnye weempawu ezaqala ukuyijoyina. Mhlawumbi ayaziwa kakuhle, kodwa lo mvelisi ebekwilizwe leelebheli zalapha ekhaya iminyaka, kwaye loo minyaka yamava ngokungathandabuzekiyo incedisile ekusunguleni imveliso engqukuva ngexabiso elihle: Chipolo One Spot. Indlalifa yeChipolo One, le lebhile intsha isebenzisa ithuba lokukhangela inethiwekhi ka-Apple, kwaye ke ngoko inezibonelelo zayo zonke: ayifuni sicelo somntu wesithathu; ukuseta ngokukhawuleza nangokulula ngaphandle kokubhalisa; sebenzisa izigidi zezixhobo zeApple ukuthumela indawo okuyo.
1 Ukucaciswa kunye noqwalaselo
2 Inethiwekhi yokukhangela yeApple kwinkonzo yakho
3 Ezinye iindlela zokuyifumana
Ukucaciswa kunye noqwalaselo
Kancinci kancinci kuneeAirTags zeApple, le diski incinci yeplastiki inebhetri etshintshiweyo ethi umenzi makayokuhlala ukuya kunyaka ngokusetyenziswa kwesiqhelo. Ukuyitshintsha, kufuneka uvule i-disc, akukho ndlela yokuvalwa ephucukileyo, yiyo loo nto i-IPX5 iqinisekisiwe (iyayichasa imvula ngaphandle kwengxaki kodwa ayinakunkcenkceshelwa). Ngaphakathi inesithethi esincinci esivumela ukuba sikhuphe izandi ukuya kuthi ga kwi-120dB, ngaphezulu kune-AirTag, into ebalulekileyo ukubafumana ukusuka ezantsi esofeni. Kwaye inkcaza encinci, ebonakala ngathi ayihlekisi, kodwa ebaluleke kakhulu: inomngxunya wokuyincamathisela kwisitshixo, iringi ebhegini yakho okanye ubhaka ... Oko kuthetha ukuba nokuba unexabiso elifana ne-AirTag (30 € vs. € 35 kwimveliso yeApple) awusayi kufuna ezinye izixhobo zokuyisebenzisa, ke ixabiso lokugqibela libiza kakhulu kwimeko yeChipolo.
Inkqubo yoqwalaselo lwayo iqala kwangoko xa sicinezela i-Chipolo, ebangela ukuba ikhuphe isandi esincinci esibonisa ukuba sele yenziwe yasebenza. Kuya kufuneka sivule usetyenziso lwethu lokuKhangela kwi-iPhone okanye kwi-iPad, kwaye ucofe izinto, songeza into entsha kwaye silinde isixhobo sethu ukuba siyifumane. Ngoku kufuneka ulandele amanyathelo abonisiweyo kwaye alula njengokongeza igama kunye ne icon ukuyichonga ngokukhawuleza kwimephu. Ileyibhile iya kuvela kulo mzuzu inxulumene neakhawunti yakho ye-iCloud kwaye ilungele ukusetyenziswa xa kufanelekile.
Unxibelelwano olusebenzisayo yiBluetooth. Asinayo i-chip ye-U1, engavumeli ukukhangelwa ngokuchanekileyo kwee-AirTags, into engandikholisayo ngokobuqu kuba ukusebenza kwayo kuyaphambuka. Kananjalo ayinayo i-NFC, kwaye oku kuthetha ukuba ukuba umntu uyayifumana, ayizukwanela ukuzisa i-iPhone yakhe kwi-chibolo, kodwa kuya kufuneka bavule usetyenziso lokuKhangela kwaye bayiskene. Kukho amanqaku amabini amabi amabi, elinye lawo linokuhanjiswa ngokupheleleyo (ukukhangela ngokuchanekileyo) kwaye enye inokulungiswa (usetyenziso lokuKhangela lusetyenzisiwe kwaye kunjalo).
Inethiwekhi yokukhangela yeApple kwinkonzo yakho
Makhe siye kwinto ebalulekileyo, yintoni eza kukunceda ufumane into yakho elahlekileyo enkosi kwiChipolo One Spot: yonke i-iPhone, i-iPad kunye neMac kwihlabathi liphela ziya kuba zii-eriyali eziza kukuvumela ukuba ufumane into elahlekileyo emephini. Ewe kude kube ngoku xa ubeka i-tag yendawo, ubenqunyelwe ukuba ube ngaphakathi kuluhlu lweBluetooth ukuyifumana, okanye ukuba nethamsanqa lokuba umntu onenkqubo efanayo nale uyidlulisileyo. Ngoku ngothungelwano luka-Apple lokuKhangela awuyidingi leyo, kuba nayiphi na i-iPhone ehlaziyiweyo, i-iPad okanye iMac iya kukuxelela ukuba into yakho elahlekileyo ikuphi kunye nemfuno yokuba kufutshane ye.
Ngale nto, ukuba ulahlekelwe yinto ungayiphawula njengelahlekileyo kwiNkqubo yoKhangelo, kwaye bonisa ukuba xa umntu eyifumana (nokuba ayenzanga ngabom) bakwazise kwaye bakubonise yona emephini. Ukuba uyaqonda ukuba kukho into elahlekileyo, angayichola, avule i-app yakhe ye-Fumana kwaye abone umyalezo owenzelwe wena owawumshiye xa ephawula ukuba ulahlekile, kubandakanya nenombolo yomnxeba anokuyitsalela ukumnceda ukuba achache. Le nethiwekhi yokufumana iApple yinkqubo ekufuphi egqibeleleyo eya kukunceda ufumane iinjongo zakho ezilahlekileyo.
Ezinye iindlela zokuyifumana
Ukuba siyibeke ekhaya ngokungafanelekanga, ungayenza isandi, kwi-app yoKhangelo okanye ngokubuza uSiri "Ziphi izitshixo zam?" Ke unokuyilandela ngesandi ude uyifumane. Isandisi-lizwi sayo sikhulu ngakumbi kunee-AirTags, kwaye Isandi asiyeki ukudlala de ungasebenzi, oko kuyasebenza ngakumbi kunokuba uye ujikeleza ubuza uSiri de uyifumane. Kananjalo unokucela usetyenziso lokuKhangela ukuba likuxelele indlela eya kwinto yakho elahlekileyo ukuba umntu othile unegalelo ekuyifumaneni emephini.
Kwaye nge-iOS 15 siza kuba nokhetho lokwaziswa xa sahlukana nayo, ke sinako ukuyiphepha ilahleko. Isaziso siya kusixelela ukuba sishiye izitshixo zethu, okanye ubhaka, kunye Singacwangcisa ezinye zeendawo "ezikhuselekileyo" ukuze xa ulapho ungasazisi Siwushiye ngasemva, ke ungashiya ubhaka wakho ekhaya ungakhange uxelelwe ngawo.
Ilebheli yelizwi yeChipolo One Spot yeyona ndlela ilungileyo yokwenyani kwiApple AirTags. Nangona isenokungabinakho ukusebenza, ayisiyonto ibaluleke kangako ukuyithathela ingqalelo, kwaye amanqaku kunye nexabiso layo liyenza ibe yimveliso egqibeleleyo kwabo bafuna ukunqanda ukulahlekelwa zezona zinto zibalulekileyo ngokusebenzisa izibonelelo zenethiwekhi yokuKhangela. UManzana. Iyafumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni yeChipolo (unxibelelwano) ye ukubhukisha kwangaphambili nge- € 30 kwiyunithi kunye ne- € 100 ngepakethi yeeyunithi ezi-4, kunye nokuhanjiswa ngo-Agasti.
Ithunyelwe nge: 10 Juni ka 2021
Utshintsho lokugqibela: 10 Juni ka 2021
Ukuzimela konyaka omnye kunye nebhetri enokutshintsha
Ukuxhathisa kwamanzi nge-IPX5
Sebenzisa uthungelwano lokuKhangela iApple
Somlomo ukuya kuthi ga kwi-120dB
Ukungabikho kwe-NFC kunye ne-U1 chip
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Chipolo One Spot, enye indlela ebalaseleyo kwii-AirTags
Nge-tvOS 15 sinokungena nge-ID yobuso ye-iPhone